Hay’adaha Dib-u-eegista Dastuurka oo kulan la qaatay Bulshada Rayidka Hirshabelle -
Home News Hay’adaha Dib-u-eegista Dastuurka oo kulan la qaatay Bulshada Rayidka Hirshabelle
Hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista dastuurka ee kala ah wasaaradda arrimaha dastuurka, Guddiga Lasocodka ee Baarlamaanka iyo Guddiga madaxa Bannaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ayaa kulan kula yeeshay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabele bulshada rayidka ah kaasoo u jeedadiisu ahayd in la helo aragtida Bulshada rayidka ee ku aadan qodobada dastuurka ee dib-u-eegista lagu sameeyay.
Kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen saddexda hay’adood ee u xilsaaran dib-u-eegista dastuurka waxaa ka soo qayb galay Haweenka, dhallinyarada, aqoonyahanka iyo dadka naafada ah eek u nool Dowlad Goboleedka Hirshabelle.
Soo dhowaynta ka dib, waxaa kulanka kalmado ka jeediyay Agaasimaha Guud ee wasaaradda Dastuurka Mohamed Abukar Zubayr isagoo xusay in Bulshada Rayidku ay door muhiim ah ku leeeyihiin geedi socodka Dastuurka , loona baahanyahay in ay aragti ku yeeahaan dastuurka maadaama ay matalayaan shacabka.
“Bulshada Rayidka waxaan dhowr jeer la tashiyo kala samaynay arrimaha dib-u-eegista dastuurka, maantana waxaa la joogaa xilli gabagabo ah, sidaa darteed waxaa muhiim ah In aan helno aragtidiina ku aadan qodobada dastuurka ee dib-u-eegista lagu sameeyay” ayuu yiri Agaasime Zubayr.
Dhanka kale, Xubanaha Guddiga Lasocodka Baarlamaanka iyo Guddiga Madaxa Bannaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in hay’adaha dastuurka uu ka soo dhammaaday dastuurkii farsamo ahaan islamarkaana ay la tashiyo badan kala yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed, maantana ay u qabanayaan shirkaan sidii loo soo uruurin laha taladii bulshada rayidka ay ku darsan lahayd dastuurka.
Gebagabadii, ururada Bulshada Rayidka Hirshabelle ayaa ka mahadceliyay sida looga talo gelinayo arrimaha dastuurka waxayna aragtiyo la taaban karo ka dhiibteen qodobada dastuurka iyagoo sidoo kalana su’aalo maangal ka waydiiyay madaxda ka socotay hay’adaha u xilsaran dib u eegista dastuurka.
Hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista dastuurka ayaa dadaal ugu jira sidii loo ansixin lahaa qodoabada farsamada ee dib-u-eegista lagu sameeyay maadaama arrimaha siyaasadda ay heshiis ka geli doonaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Previous articleBahrain’s FM makes its first official visit to Israel
Next articleMahdi Guuleed “Yaa loo daymo la’aan doorashada 2021 sidii dowlad Goboleedyada wareegi koowaad oo kale”